XOG:- Isbedal weyn oo lagu sameyn doonno qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha gobolka Banaadir – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Isbedal weyn oo lagu sameyn doonno qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha gobolka Banaadir
Ilo lagu kalsoonaan karo oo aynu ka heleyno xafiiska guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maalmaha soo socdo isbedal ballaaran lagu sameyn doonno qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir.
Illaa 10 guddoomiye degmo ayaa la sheegayaa inay xilalkooda weyn doonaan maalmaha soo socdo, wuxuuna gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed diyaariyay guddoomiyeyaasha cusub ee bedali lahaa kuwii hore.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed oo tallaabadaan hore u qorsheeyay ayaa dib ugu dhigay munaasabadda 15-ka May oo ah xuska maalinta dhalinyaradda Soomaaliyeed ee SYL oo maanta ku beegan.
Waxaa haatan durbadiiba wel-weli baahsan soo food-saaray qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, oo mid waliba ka wal-walsan in xilka laga qaado.
Guddoomiyeyaasha haatan xilalka haaya ayaa u badan kuwa jaamacado uga soo baxay dalka Suudaan, halka kuwa cusubne ay ku jiraan qurbo-joog iyo dhalinyaro ka qeyb-qaadatay ololihii doorasho ee lagu soo doortay madaxweyne Farmaajo.
Maalmaha soo socdo ayaa la filayaa inay dhacdo ku dhawaaqista guddoomiyeyaasha cusub ee degmooyinka gobolka Banaadir.